BINANCE - Linux ပေါ်တွင် Binance Desktop App ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
BINANCE - Linux ပေါ်တွင် Binance Desktop App ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဒီနေ့ငါတို့ပြောမယ် DeFi နယ်ပယ် တနည်းကား, ဒါပေမယ့် Wallets, ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းဆော့ဖ်ဝဲကို (မိုင်းလုပ်သား) ပေါ်တွင်မဟုတ်သလို Messaging ကို DApps ပေါ်တွင်မဟုတ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာကြမယ် Cross-platform Desktop application သောတစ်၏ User Interface ကိုတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာသည် အွန်လိုင်း (ဝဘ်) ဖလှယ် လူသိများတဲ့ခေါ် "Binance".
ဒါဟာအတွက်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် DeFi နယ်ပယ်, Binance လက်ရှိအဓိကတစ်ခုဖြစ်သည်စဉ်းစားသည် Cryptocurrency ဖလှယ်မှု ကမ္ဘာ၏ Plus အား, "Binance" တစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းထားသည် DeFi ဂေဟစနစ် အလွန်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသိအမှတ်ပြုသည်။
1 Cryptocurrency ဖလှယ်မှု
2 BINANCE: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်
2.1 Binance ဆိုတာဘာလဲ။
2.2 Binance Desktop App ဆိုတာဘာလဲ။
2.3 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
အကြောင်းအများကြီးမသိစေခြင်းငှါသောသူတို့အဘို့ Cryptocurrency ဖလှယ်မှု, ငါတို့ခေါ်ယခင်ငါတို့ပို့စ်မှကောက်နုတ်ချက်ကိုးကားပါလိမ့်မယ် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
ဒါကြောင့်ငါက၏အယူအဆအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ် Cryptocurrency ဖလှယ်မှုဤစာစောင်၏အဆုံးတွင်စိတ်ဝင်စားသူများသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် -
"Cryptocurrencies တစ်ခုချိန်း (လဲလှယ်) လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင်သောသူတို့အားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရည်ညွှန်းသည် cryptocurrencies ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများဖြစ်သည့်ရှယ်ယာများ (သို့) ဘဏ္titlesာရေးခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့လည်ပတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ တစ် ဦး ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် ရိုးရာသို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း (DEX), သင့်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည် အသုံးပြုသူများ (ကုန်သည်များ) ၎င်းတို့သည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ (အခမဲ့တန်ဖိုးများ) ပေါ် အခြေခံ၍ အမြတ်အစွန်းရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲထားသော crypto ဈေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။"
"ထို့အပြင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပလက်ဖောင်း၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ KYC (သင့်ဖောက်သည်ကိုသိပါ) y AML (ငွေကြေးခဝါချမှု)။ ထိုသူတို့ကများသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ခံနှင့် မြဲမြံစေလော့ မြို့တော်ကန့်သတ် ယင်း၏ပလက်ဖောင်းတွင်ပါဝင်ရန်။ နောက်ဆုံး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဖလှယ်မှု (DEX) မတူတာက ရိုးရာဖလှယ်မှု၎င်းတို့သည်အလွန်တူညီသောနည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်၊ သို့သော်ယခင်များသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အဲဒီထဲမှာသူတို့ကိုပြောဆိုလိုသည် အဘယ်သူမျှမကြားခံရှိပါတယ် နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကြောင့်ပလက်ဖောင်း Self- ရပ်တည်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ပြောကြသည် မြင့်မားသော privacy နှင့်အမည်မသိပင်အဆင့်ဆင့်."
BINANCE: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်
ဒါကြောင့်ပြီးသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက Cryptocurrency ချိန်း၎င်းသည်အထူးရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် «Binance» လာမည့်:
၎င်းကို၎င်းအတွက်အရေးအပါဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် စျေးကွက်ပမာဏကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြသည် အားလုံးအထက်, ကကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ လုံခြုံသော၊၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Cryptocurrency အားဖြင့် powered BNB.
Binance Desktop App ဆိုတာဘာလဲ။
La Binance Desktop လျှောက်လွှာ အခြေခံအားဖြင့်အဲဒါမျိုးပါ အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် (UI) အခြေခံ စာရေးခုံ တူညီတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့အရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတုပတယ်။
ဤအချက်ကိုမစတင်မှီသတိပြုသင့်သည်မှာ၊ ဤတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည် Respin (တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်) ထုံးစံအမည်ရှိ အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အရာအပေါ်အခြေခံသည် MX Linux.
ဘယ်ပြီးသားဘို့ optimized ဖြစ်ပါတယ် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအကြံပြုချက်များစွာတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည် «သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ».
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Binance Desktop လျှောက်လွှာ ငါတို့လည်ပတ်နိုင်တယ် ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ "Binance" သို့မဟုတ်ယင်း၏အပေါ်တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း ၏ GitHub အပေါ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ "Binance".
download ပြီးသား အထုပ်။ "deb" (ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ကျသောကိစ္စအတွက်) ၎င်းကို command ကို အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည် "Dpkg" o "Apt" အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့သူကမှတဆင့်ကွပ်မျက်နိုင်ပါတယ် Applications ကိုမီနူး သူ၏ GNU / Linux များ နာမည်အောက်မှာ "Binance".
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်ဆက်လက်လေ့လာလိုလျှင် DeFi နယ်ပယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် «FromLinux »ဤအခြားအခြားပို့စ်များကိုစူးစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Binance»အထူးသဖြင့်မိမိအကြောင်းကို Desktop အက်ပလီကေးရှင်း (Desktop App) Multiplatform, သောကမ်းလှမ်း အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် (UI) အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာများမှအဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် GNU / Linux များ, ၏အဆောက်အ ဦ အပေါငျးတို့သသုံးစွဲဖို့နိုင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင် cryptocurrency လဲလှယ် ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမပါပဲ၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » BINANCE - Linux ပေါ်တွင် Binance Desktop App ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Google Trends 20-21 - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux
MOS-P5: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁